Marka aad go'aansato inaad isticmaasho | Ota Bunkanomori
Markaad isticmaaleyso hoolka, qolka laba jibbaaran, geeska qolka bandhiga, iyo fagaaraha
Mabda 'ahaan dukumiintiyada soo socda hal bil ka hor rajada isticmaalka maalin kadib markay keenaan sida, fadlan tag kaaliyaha iyo kulamada kugu filan.
Barnaamijka ama jaantuska horumarka, waraaqaha, tigidhada gelitaanka ama tigidhada lambarka leh (tusaale ahaan)
Waxaas kor ku xusan ka sokow, dhacdooyinka hoolka ka dhacayaa waa (XNUMX) sawir diyaarinta marxaladda, (XNUMX) sawir diyaarinta nalka, iyo (XNUMX) sawir diyaarinta acoustic.
(Haddii lagaa gacan galiyay qandaraasle, fadlan nala soo socodsii qandaraaslaha magaciisa iyo macluumaadka lagala xiriirayo.)
Markaad isticmaaleyso qolka kulanka, aqoon isweydaarsiga hal abuurka, ama istuudiyaha
Fadlan ogeysii miiska hore ee ku saabsan qaabka gudaha iyo tas-hiilaadka shilalka ugu yaraan 2 maalmood ka hor taariikhda isticmaalka.
Waxay kuxirantahay sida loogu talagalay, waxaan ku weydiisan karnaa inaad kulan la yeelato shaqaalaha.
Sida caadiga ah, badeecadaha laguma iibin karo istuudiyaha iyo meelaha furan.
Isticmaalka dabka, iwm. Qeybta Kahortaga Waaxda Dabka ee Omori
1-32-8 Omorihigashi, Ota-ku, Tokyo Telefoonka: 03-3766-0119
Amniga iwm Saldhiga Booliska Omori
1-1-16 Omorinaka, Ota-ku, Tokyo Telefoonka: 03-3762-0110
Qabashada cuntada Ota Ward Xarunta Caafimaadka Nadaafadda Nadaafadda Nadaafadda Cuntada
1-12-1 Omorinishi, Ota-ku (dabaqa 6aad ee Dhismaha Dowlada ee Deegaanka Omori) Telefoonka: 03-5764-0691
Macluumaadka ku saabsan dhacdooyinka waxaa lagu dhejin karaa bilaash joornaalada macluumaadka ee ay daabacaan Ururka Dhiirrigelinta Dhaqanka ee Ota Ward iyo bogga internetka. (Waxay kuxirantahay waxyaabaha ay ka kooban tahay, horay ayaan u eegi doonnaa.)
Maalinta la isticmaalayo, fadlan soo bandhig foomka oggolaanshaha isticmaalka soo dhoweynta dabaqa 1aad ka hor intaadan qolka isticmaalin.
Haddii ay dhacdo musiibo, fadlan hubso inaad qaaddo dhammaan tallaabooyinka suurtagalka ah ee hagidda daadgureynta, xiriirka degdegga ah, iyo gargaarka degdegga ah ee booqdayaasha.
Fadlan qaado qashinkaaga marka aad wax cunayso ama wax cabayso, ama alaabada qashinka ah ee la soo saaray inta lagu jiray isticmaalka.Haddii ay dhib tahay in gurigiisa la geeyo, waxaan uga shaqeyn doonnaa lacag, sidaas darteed fadlan nala soo socodsii.
Abaabuluhu wuxuu mas'uul ka yahay abaabulka iyo hagidda martida, qabashada, iyo madaddaalada.Haddii la filayo in tiro badan oo soo booqdeyaal ah ay imaan doonaan ka hor waqtiga furitaanka, ama haddii ay suurta gal tahay jahwareer waqtiga munaasabadda, waa masuuliyadda qabanqaabiyaha inuu u xil saaro qabanqaabiyayaal ku filan.
Iyada oo ku xidhan dhacdada, qabanqaabiyaha ayaa u diyaarin doona shaqaalaha masraxa, laydhka, codka, iwm.
Ha cunin, ha cabbin, sigaarna ha cabin marka laga reebo meelaha loogu talagalay.
Adeegsiga qolka ay suurta gal tahay in alaabada la geeyo / la geeyo, waxaan ku siin doonaa tigidh nadiifinta oo baarkinka oo bilaash ah maalinta isticmaalka.Fadlan weydii shaqaalaha qolalka la qaybin karo iyo tirada qeybinnada.
Meesha baabuurta la dhigto waxay leedahay xadka ugu sarreeya ee 2.8m iyo xadka dhererkeedu yahay 5m.ogow taas.
Intaas waxaa sii dheer, macaamiisha guud iyo dadka kale ee isticmaala qolka, iyo haddii tirada qeybinta ay ka badan tahay tirada, waa lagaa qaadayaa.
Fadlan ka soo gal iridda hore ee dabaqa 1-aad adigoon tilaabooyin lahayn, jiirada iridda dambe, ama baarkinka la dhigto dabaqa 1-aad.Fadlan isticmaal wiishka si aad u gaarto qol kasta.
Musqulaha loogu talagalay marin-u-socodka badan ee curyaamiinta (musqusha qof kasta) ayaa ku yaal dabaq kasta oo ka mid ah dhismaha kulanka iyo hoolka (dabaqa 1aad, qolka labiska).